China egweri ala emepụta na suppliers | BBMG
ájá mkpoko na akụkụ ahụ mapụtara
Na-adịgide adịgide magnet kpọmkwem-mbanye
Na-adịgide adịgide magnet kpọmkwem-draịva electric ala
ebe post insulator
poselin post insulator
egweri akụrụngwa na akụkụ ahụ mapụtara
Senti vetikal na nkume igwe nri
Mkpụrụ igwe na-ekpo ọkụ
Raw Vetikal Mill
Slag Vetikal Mill
rotary kiln na akụkụ ahụ mapụtara
kiln mapụtara akụkụ
onye na-achikota uzuzu
ájá mkpoko mapụtara akụkụ
H ọwa ígwè
Ndị na-emepụta ọkachamara ...
11kV-1100kV ọdụ porcela ...
Standardkpụrụ Ihe GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO
Ihe nhazi Ibe ya bụrụ, Nkedo, ịgbado ọkụ
Ọgwụgwọ Heat Mgbakwunye, Na-edozi, Q&T, Ntinye Ọgwụ
Machining Ndidi Max. 0.01mm
Igwe na-arụ ọrụ Max. Ra 0.4
Modul nke Gear 8-60
Izi ezi nke Ezé Max. ISO mezuwo 5
Arọ / Nkeji 100kgs - 60 000kgs
Ngwa Mining, Cement, Construction, Chemical, Drilling, Steel Mill, Sugar Mill na Power Plant
Asambodo ISO 9001
Nke gara aga: Ala Press
Osote: Slag vetikal na nkume igwe nri
Igwe ihe simenti bu akụrụngwa nke na-egweri ihe eji eme simenti. Workingkpụrụ ọrụ dị ka ndị a: a na-enye akụrụngwa nri n'ime eriri nri site na atọ n'usoro ikuku-mkpọchi ikuku, na eriri ntanetị na-agbatị n'ime ime igwe ahụ site n'akụkụ nke separator. Ihe ndị a dakwasịrị n'etiti etiti igwe na-egweri site na mmetụta nke ike ndọda na ikuku ikuku. Na-egweri diski nwere njikọ chiri anya na reducer ma na-agbagharị na ọsọ ọ bụla. Ọsọ na-agba ọsọ mgbe niile ...
Slag vetikal na nkume igwe nri
Slag vetikal nkume igwe na-adịghị mma mgbali ikuku Ibulite ụdị egweri akụrụngwa, nke ga-akpọ nkụ na slag na Mike slag. Ala slag site na igwe na-egweri ihe na-egweri diski nwere akụkụ abụọ: obere akụkụ nke slag ọhụrụ nwere nnukwu mmiri na ọtụtụ ala slag na-emechabeghị na mmiri dị ala. Nke a na akụkụ nke na-abụghị okokụre slag bụ keadighi rarii ihe laghachiri mgbe nkewa site separator n'ihi na nke ibu ahụ. Ikuku siri ike ikuku kpatara ...
JGM2-113 coal na igwe ihe na-agba ọsọ ọsọ. Akụkụ ya ndị na-agagharị agagharị bụ mgbanaka na-agbagharị na 3 na-egweri egwu nke na-agagharị na mgbanaka ahụ, a na-edozi rollers na nke ọ bụla nwere ike ịdabere na axis ya. Iji gwerie raw coal na-ada na mgbanaka na-egweri site na eriri ntụ nke etiti nke ihe igwe ihe na mgbanaka na-agagharị na-agagharị na-egwu ọkụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ site na ike nke centrifugal. tụgharịa ...
The ala pịa bụ ọhụrụ egweri ngwá mepụtara ufọt ufọt 1980. The ọhụrụ extruding na-egweri technology tumadi mejupụtara ya nwere a dị ịrịba ama mmetụta na ike ịzọpụta, na ọ natara oké anya si mba ciment ụlọ ọrụ. Ọ ghọọla nkà na ụzụ ọhụrụ na mmepe nke teknụzụ na-egweri. Igwe ahụ na - agbaso ụkpụrụ ọrụ nke obere ume ike nke ihe eji eme ihe dị elu ma nakweere ọnọdụ ọrụ nke otu urughuru ur ...
JLMS ala na nkume igwe nri na-eji maka tupu-egweri nke ciment clinker. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ: clinker na-abanye na nkume igwe nri site na etiti etiti: ihe ahụ na-ada n'etiti etiti egweri site na ike ndọda. The egweri diski nwere njikọ chiri anya na reducer na-ahọrọ adiana na a mgbe nile na-agba. The mgbe nile-ọsọ adiana nke egweri diski ekesa ala ihe evenly na horizontally na lining efere nke egweri diski, ebe taya-ụdị egweri ala ata aru nke ...
Ngwongwo a na-ahụ maka ihe ọkụkụ bụ otu ụdị igwe na-agba agba nke nwere 4 rollers. The egweri ala, rocker ogwe aka, support Ọdịdị na haịdrọlik usoro mejupụtara egweri ike unit, nke na-ekewa n'ime 4 iche iche na-mere ndokwa gburugburu egweri diski. Na teknuzu na echiche nke aku na uba, ihe akuku uzo a na-egweri ngwa ngwa, ma e jiri ya tụnyere ihe eji eme ihe eji eme ihe, o nwere uru ndi a: A ga-eji ya mee ihe maka iche iche ihe ―Small ...
Qixin ụlọ, 15 xinhua dong dao, lubei district, tangshan obodo, hebei n'ógbè, China ince, China